Sida loo Codsado Deeqda Agbami ee Ardayda Nigerian 2022
Waa kuwan wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato oo ku saabsan Agbami deeqda waxbarasho ee ardayda reer Nigeria, shuruudaha buuxa, nidaamka dalabka iyo isku xirnaanta, u qalmidda, shuruudaha u-qalmitaanka iyo habka xulashada.
Agbami Scholarship waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee joogtada ah ee Nigeria. Had iyo jeer waa dagaal maskaxeed maskaxeed inta badan jaamacadaha Nigeria kuwaas oo raadinaya kaalmo dhaqaale oo dheeri ah marka laga reebo kan ay xaq u leeyihiin mas'uuliyiintooda ama sidoo kale ardayda saboolka ah ee halganka ugu jira inay ku riixaan iskuulka.
1 Agbami Deeq waxbarasho
1.1 Immisa ayey mudan tahay deeqda waxbarasho ee Agbami?
1.2 Ayaa dalban kara deeqda waxbarasho ee Agbami ee Nigeria?
1.3 Maxay tahay CGPA ayaan ubaahanahay inaan ku dalbado deeqdan waxbarasho?
1.4 Goorma ayuu bilaabmayaa codsiga deeqda waxbarasho ee Agbami?
1.5 Agbami Scholarship shuruudaha buuxa ee loogu talagalay dadka reer Nigeria
1.6 Sidee loo codsadaa deeqda waxbarasho ee Agbami ee Nigeria?
1.7 Tilmaamaha ku guuleysta deeqda waxbarasho ee Agbami
Agbami Deeq waxbarasho
Barnaamijka deeqda waxbarasho ee Agbami waxaa si buuxda u kafaala qaada dhammaan shirkadaha ku lugta leh aagga saliidda Agbami gaar ahaan Star Deep Water, Shirkadda Chevron ayaa abaabusha deeqda waxbarasho ee Agbami. Ma ahan deeq waxbarasho oo aan macquul aheyn in si uun loo helo laakiin hadana wali waa suurta gal in dadku qaladaad sameeyaan xitaa waxyaabaha ugu yar taas oo ah sababta tusahan uu halkan u joogo inuu kugu hago.
Qaabka imtixaanka deeqda waxbarasho wuxuu daboolayaa meelaha soo socda:
Sababta hadalka ah
Immisa ayey mudan tahay deeqda waxbarasho ee Agbami?
Deeqda Agbami waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee ugu wanaagsan Nigeria. Way u qalantaa qadar cayiman. Ardayda injineernimada, deeqda waxbarasho waa boqol kun oo Naira, halka ardayda caafimaadka, ay u tahay laba boqol oo kun oo Naira.
Ayaa dalban kara deeqda waxbarasho ee Agbami ee Nigeria?
Si sharaf leh, deeqda waxbarasho ee Agbami waxay u furan tahay ardayda dhigata jaamacadaha heerarka 100 iyo 200 siday u kala horreeyaan. Sannadkan, ardayda doonaya inay codsadaan deeqdan waxbarasho waa inay ku heleen gelitaanka jaamacadda 2018/2019 iyo 2019/2020 kal-fadhiga tacliimeed midkood heerarka kor lagu soo sheegay.
Si kastaba ha noqotee, taasi maahan in dhammaan ardayda heerarka aan horay u soo sheegnay ay dalban karaan deeqdan waxbarasho; deeqdani waxay diiradda saareysaa injineernimada iyo ardayda caafimaadka gaar ahaan inkasta oo ardayda ku jirta waaxyaha xoogaa la xiriira caafimaadka iyo injineernimada la tixgelin karo.
Maxay tahay CGPA ayaan ubaahanahay inaan ku dalbado deeqdan waxbarasho?
Ujeeddada codsadayaasha, ugu yaraan CGPA guddiga sare ee Agbami waxay ka filaysaa ardaydeeda inay tahay 3.5 taas oo ah heerka ugu hooseeya ee heerka fasalka labaad ee inta badan jaamacadaha halkaasoo nidaamka qiimeynta ay ku saleysan tahay cabir dhan 0.1 illaa 5.0 arday oo CGPA ay ka hooseyso dhibicdan. arrin la xiriirta si guul leh oo looga gudbo arjiga iyo habka xulashada.
Goorma ayuu bilaabmayaa codsiga deeqda waxbarasho ee Agbami?
Hagaag, waqtiga kama dambaysta ah ee arjiga ee deeqda waxbarasho ee Agbami waxay ahayd 30th Oktoobar sanadkii hore. Guddiga deeqaha waxbarasho ayaa u furay ardayda fursad ay ku bilaabaan codsigooda isla markiiba. Deeqdani waxay bilaabmaysaa horaanta bisha Maarso sanad walba sida ugu dhakhsaha badan ee kulleejooyinka cusub ee cusub / ardayda cusub ay u degaan dugsiga.
Agbami Scholarship shuruudaha buuxa ee loogu talagalay dadka reer Nigeria
Nidaam kasta oo codsi deeq waxbarasho ah wuxuu u hoggaansamaa qawaaniin gaar ah oo ardayda ku amraya inay bixiyaan dukumiintiyo qaarkood oo u qalma iyaga oo adeegsanaya. Marka laga hadlayo deeqda waxbarasho ee Agbami, ka hor inta aanad isku dayin inaad dalbato deeqda waxbarasho, waxaa muhiim ah inaad ogaatid dukumiintiyada soo socda maadaama ay kuu qalmi doonaan inaad codsan karto.
Sawir baasaboor asal ah oo 450px ah oo 450px ah oo aan ka yarayn 3 bilood. (aan ka badnayn 200kb)
Waraaqda aqoonsiga ee Dawlada Hoose
Sidee loo codsadaa deeqda waxbarasho ee Agbami ee Nigeria?
Si aad u dalbato deeqda waxbarasho, raac jawaabta hoose:
Ka eeg bogga
Hubso inaad ku lifaaqdo dukumintiyada ku habboon markii lagu weydiisto inaad soo dejiso iyo sidoo kale inaad hubiso in si habboon loogu magacaabay si looga fogaado isku darka dukumiintiyada.
Dhagsii Diiwaangelinta / galitaanka si aad u sameysato koonto ama u gal koontadaada waxbarasho. Codsadeyaasha cusub waa inay u gudbaan emaylladooda si ay u kiciyaan koontadooda.
Ka dib markaad shaqeyso koontadaada, guji scholastica.ng/schemes/agbami
Geli macluumaadkaaga kadib marka ay qasab kugu noqoto in aad ku qorto emaylkaaga iyo lambarkaaga sirta ah.
Gali macluumaadkaaga shakhsiga ah, Lambarka Aqoonsiga Qaranka (haddii la heli karo), macluumaadka waxbarashada, macluumaad kale ka dibna geli nuqulo la marsiiyey pf dukumiintiyadaada
Haddii magacyada dukumiintiyadaadu ay ku kala duwan yihiin qaab kastoo ay doontaba ha noqotee, soo dhig dhaar dhaar ama shahaado haddii kale
Mar kale fiiri dukumiintiyadaada ka dib markaad soo rarto si aad uga fogaato khaladaadka aan loo baahnayn.
Soo rar sawirkaaga baasaboorka markii loo baahdo.
Mar labaad dib u hubi codsigaaga si aad uga fogaato khaladaadka ka dibna ku noqo bogga hore. Dhagsii qorshaha aad rabto inaad codsato guji "codso hadda" si aad u gudbiso macluumaadka
Waxaad heli doontaa ogeysiis ku saabsan dalabka guuleysta ee shaashaddaada laakiin haddii aad weli shaki qabto waxaad riixi kartaa "codsigeyga" hoosta qaybta "koontadayda" ee koontadaada koontada
Hada ku noqo scholastica.ng inaad geliso emaylkaaga iyo lambarkaaga sirta ah si aad u soo dejiso astaantaada xaqiijinta oo aad u sii waddo in Madaxa Waaxdaadu saxeexo dukumintiga
Kadib gali nuqul nuqul ah oo ah astaanta xaqiijinta saxeexan, si markaa loogu isticmaali karo xaqiijinta
Ku noqo scholastica.ng/schemes/agbami iyo cusbooneysiinta arjiga Lambarka Aqoonsiga Qaranka (NIN) si loo hubiyo dhammaystirka.
Tilmaamaha ku guuleysta deeqda waxbarasho ee Agbami
Ka taxaddar habboon marka aad buuxineysid foomka, maxaa yeelay mar alla markii aad gudbiso arjiga, dib uma sameyn kartid wax sixitaan ah Qalad yar oo si sahal ah looga hortagi lahaa ayaa ka hor istaagi kara qofka inuu helo deeqda waxbarasho.
Si taxaddar leh u aqri macluumaadka abaalmarinta deeqda waxbarasho oo keen dukumintiyada la codsaday adigoon qaarna ka maqnayn.
Codsi Hore ugu filan: Ardayda badankood waxay sugaan illaa ay ka maqlaan in waqtiga kama dambaysta ahi yahay maalinta ku xigta ka hor intaanay bilaabin hawsha arjiga. Nolosha, kan ugu horreeya ee ugu horreeya ayaa marka hore loo adeegaa Codsigaagii hore wuxuu marin aad u dheer ka geysanayaa inuu kaa caawiyo guddiga.
Ha ka codsanin wakiil kasta oo ka socda xeradaada ama magaalada aad ku dhalatay. Dhammaan codsiyada waxaa looga baahan yahay in lagu sameeyo khadka tooska ah.
Waa inaad mas'uul ka ahaato saxnaanta faahfaahintaada, waqti si aad u hubiso in wax waliba sax yihiin
Rumayso inaad kujirto liiskaaga, tag masaafada dheeriga ah oo aad ka iibsato su'aalo hore ama aad kahesho asxaabtaada ama meelkasta oo aad awoodid ka dibna bilow inaad si dhakhso leh wax ubarto.
Hel lataliye: kani wuxuu noqon karaa qof horey usoo maray howsha aad mari doontid, wax ka baro iyaga. Aqoontu waxay timaadaa marba marka ka dambaysa iyo in lagu guuleysto mararka qaarkood dhinacyada nolosha qaarkood, waxaa laga yaabaa inaan u baahanahay inaan kobcino rabitaanka ah inaan si wanaagsan wax uga barto dadka.
Fahmaan marxalad kasta oo deeqda waxbarasho ah: laga soo bilaabo nidaamka dalabka illaa inta ay tahay inaad ka soo gudubtay baaritaan badan, xigasho ku dabakh. Ha u qaadin wax marxalad ah fudeyd. Daraasad, daraasad, daraasad.
Xitaa ka dib waa inaad heshay abaalmarinta deeqda waxbarasho, ilaali CGPA aad u wanaagsan. Ku guuldareysiga inaad muujiso CGPA wanaagsan waxay u horseedi kartaa joojinta deeqda waxbarasho maadaama guddiga ay bilaabi karaan inay kuu arkaan inaadan dhab ahayn.
Gabagabadii, deeqda waxbarasho ee Agbami waxay lahaan kartaa fursaddaas aad baryi jirtay oo keliya. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso ayaa ah inaad qaaddo tallaabada geesinimada leh. Dad badan ayaa jecel inay wax ka daawadaan meel fog: taasi nolol maahan. Kac oo tag oo guuleysii.
Intaad codsaneysid deeqdan waxbarasho, qaado tallaabooyinka ku habboon si aadan u sameynin wax khalad ah oo khatar gelin kara fursadahaaga helitaanka deeqda waxbarasho. U diyaargarow deeqdan waxbarasho haddii aad codsatay sidii oo aad u diyaar garoobeyso imtixaan caalami ah oo guddi ah, waligaa ma jirin qof ku guuleystay kaliya nasiib, waa inaad wax qabataa. Ka bax maanta!
Deeqda waxbarasho ee MTN ee loogu talagalay ardayda shahaadada jaamacadeed ee Nigerian
Sida loo dalbado deeqda waxbarasho ee NNPC / Chevron
Codso deeqaha waxbarasho ee shahaadada koowaad ee ExxonMobil
Ka dalbo Koorsooyinka Khadka Tooska ah ee Kanada
Codso Koorsooyinka Bilaashka ah ee Jaamacadda Harvard
Agbami deeq waxbarashoCodsiga deeqda waxbarasho ee Agbamicodso deeqda waxbarasho ee AgbamiSida loo codsado Agbami ScholarshipDeeqaha waxbarasho ee NigerianTalooyin ku saabsan sida loo helo deeqda waxbarasho ee Agbami
Previous Post:Shuruudaha Jaamacadda Windsor | Khidmadaha, Barnaamijyada, Deeqaha waxbarasho, Qiimeynta
Post Next:4 Dugsiyada Sare ee Kitaabka Quduuska ah ee Bilaashka ah ee Maraykanka ee loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah
Faith wuxuu leeyahay,
October 27, 2021 at 7: am 39
Pingback: http agbami deeq waxbarasho gal com com Tilmaamaha Tilmaan -bixiyaha Xariirka Xisaabaadka - trustne.com
Ogbu Angela wuxuu leeyahay,
June 1, 2021 at 2: am 35
Ii sheeg markii diiwaangelintu socoto